ဒေါက်တာ ဗိုက်ကလေး www.drbikalay.com ချစ်တယ်....ခလေးရယ်...
အစ်ကိုတို့က နောက်ဆုံးတန်းပဲ လူလဲသိပ်မရှိပါဘူး....``
`` ရုပ်ရှင်က ဆူညံသော သေနပ်ပစ်သံများဖြင့် စတင်ပြနေပြီဖြစ်သော်လည်း..ချိုရီနှင့် အစ်ကိုကတော့ မကြည့်ဖြစ်ကြ...။ ``ချိုရီ...ကိုင်ထားပေးပါလား...ရော့ ဒီမှာ...``
`` နွေးနွေးကြီးဖြင့် မာကျောကာ တဆတ်ဆတ်လှုပ်ရှားနေသော အကြောအဖုအထစ်များဖြင့် အစ်ကို့လီးကြီးကို ချိုရီ မရဲတရဲလေး ကိုင်ထားရင်းမှ အစ်ကိုမခိုင်းပဲ ဂွင်းတိုက်ပေးနေမိပြန်သည်..။ အစ်ကို့ပါးစပ်မှ တဟင်းဟင်း အသံလေးများထွက်လာပြီး ချိုရီနှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို ဆတ်ခနဲဆွဲယူပြီး ငုံခဲလိုက်သည်..။ ပြီး....လျှာကြီးက ချိုရီ့ ပါးစပ်လေးထဲသို့ ဟိုဒီ လှုပ်ရှားတိုးဝင်လာလေသည်..။
``ဟင့်....`` ချိုရီက ရင်လေးကော့ပြီး အစ်ကို့ခေါင်းကို ကိုင်ရင်း မသိမသာလေး တွန်းဖယ်နေ၏..။ ကျန်လက်တစ်ဖက်ကလည်း အစ်ကို့လီးကြီးကို ဒစ်ပေါ်အထိ လက်ချောင်းများဖြင့် ပွတ်သပ်ရင်း မနားတမ်း ဂွင်းတိုက်ပေးလိုက်မိသည်..။
အစ်ကို ကဲလာပြီ....။ ချိုရီ့ ထမီလေးအောက်မှ လက်ကို လျှိုနှိုက်ပြီး စောက်စိလေးကို ထစ်ခနဲ ထစ်ခနဲ နေအောင် ပွတ်သပ်ပေးနေပြန်ရာ ရုပ်ရှင်ရုံထဲမို့သာ ၊ တစ်နေရာမှာဆိုရင် အစ်ကို့အလိုကျ အလိုးခံပစ်လိုက်ချင်စိတ်တွေ ပြင်းထန်လာသည်..။
အတန်ကြာ ဂွင်းတိုက်ပေးနေသော ချိုရီ့လက်ကလေးတွင် ပြစ်ချွဲစေးထန်းသော အရေများ ပေကျံကုန်သည်..။ ချိုရီ လန့်ပြီး အစ်ကို့ပုဆိုးနှင့် ပွတ်သုတ်လိုက်သည်..။ ``ဘာတွေ...ထွက်ကုန်တာလဲ မသိဘူး..`` ချိုရီက အမှောင်ထဲမှ လီးကြီးကို ငုံ့ကြည့်ရင်း ပြော၏..။
စင်စစ် ချိုရီတစ်ယောက် ယခုကဲ့သို့ တပါးသောယောက်ျားလေးတစ်ယောက်၏ လိင်အင်္ဂါကို ကိုင်ဖို့ မဆိုထားဘိ...အရွယ်ရောက်သော ယောက်ျားတစ်ရောက်၏ တန်ဆာကိုမျှ မြင်ဘူးခြင်းမရှိခဲ့...။ အလားတူ မိမိစောက်ဖုတ်လေးကို ယခုကဲ့သို့ ထိုးနှိုက်မွှေနှောက်ဖို့ မဆိုထားနှင့် ၊ မိန်းမချင်းပင် မမြင်ရအောင် ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိ နေခဲ့သူကလေးဖြစ်သည်..။
သည်မျှနှင့်လည်း အစ်ကိုသည် အားရပုံမပေါ်သေး..။ ချိုရီ့ ဘော်လီအင်္ကျီလေးအောက်မှ နူးညံ့အိစက်သော နို့လေးနှစ်လုံးကို လက်လျှိုနှိုက်ပြီး လုံးခြေနယ်ဖတ်နေပြန်ပါသည်..။ ချိုရီ ထွန့်ထွန့်လူးအောင် ခံစားရ၏..။ ဘာကြောင့် သည်အရာများကို ကိုင်တွယ်ထိတွေ့ခြင်းဖြင့် ကာမအရသာတို့သည် စောက်ခေါင်းလေးအတွင်း၌ ယိုစိမ့် ဖိတ်စင်ကျလာအောင် ကောင်းရပါသနည်း....ဆိုသည်ကိုမူ ချိုရီ တကယ်မဝေခွဲတတ်..။
လှိုက်လှိုက်မောမော ချိုရီ တောင်းပန်တိုးလျှိုးပေမဲ့လည်း
အစ်ကို တစ်ပြားသားမျှ မလျှော့..။ နောက်ဆုံး အားမလိုအားမရ ဘော်လီအင်္ကျီလေးကို
မတင်လိုက်ပြီး သူ့နှုတ်ခမ်းထူထူကြီးဖြင့် နို့ဆာနေသော
ခလေးငယ်ပမာ တပြွတ်ပြွတ် စို့နေပြန်တော့သည်..။
ချိုရီ တစ်ကိုယ်လုံး ရှက်ခြင်းကြောက်ခြင်း အရသာတွေ့ခြင်းများ ရောနှောကာ တစ်ကိုယ်လုံးရှိ အကြောအချဉ်များ တောင့်တင်းကွေးကောက်သွားပြီး အစ်ကို့ပုခုံးကြီးများကို အမှတ်တမဲ့ ငုံ့ပြီး ကိုက်ခဲထားရင်း စောက်ခေါင်းလေးထဲမှ အရေများ တဘွပ် ဘွပ် ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်မိတော့သည်..။
ဟု ချော့မော့နှစ်သိမ့်ပြီး လူချင်းခွာလိုက်ရသည်..။
ဒါတောင်မှ အစ်ကိုက အရှိန်မသေပဲ တငေါက်ငေါက် တောင်နေဆဲ သူ့လီးကြီးကို ချိုရီအား အုပ်ကိုင်ထားစေသည်..။ ချိုရီ..အင်္ကျီများ နေသားတကျဖြစ်ချိန် ၊ ထမီလှည့်ဝတ်ပြီးချိန်တွင် ရုပ်ရှင်ရုံမှ အားလပ်ချိန် မီးများလင်းသွားလေရာ ချိုရီ မျက်နှာလေး ပူထူပြီး အစ်ကို့ကို မကြည့်ရဲတော့ပဲ တွင်တွင်ကြီး ငုံ့ထားမိသည်..။
``ပြန်မယ်…ကို..ရယ်…`` ချိုရီ ငိုသံလေးစွက်ပြီး တိုးတိုးလေးပြောမှ အစ်ကိုက ချိုရီ့လက်ကလေးကို တယုတယ ကိုင်ဆွဲပြီး ရုပ်ရှင် မကြည့်တော့ပဲ ပြန်ထွက်လာခဲ့ကြလေသည်..။ ----------------×-----------------×-------------------
``ဘာဇာတ်ကားလဲ…ဘယ်ရုံမှာလဲ..`` ဟု ချိုရီ့ကို မေးလျင် ချိုရီ ဖြေတတ်မည် မဟုတ်…။ ရယ်စရာတော့ ကောင်းသည်..။ အင်္ဂလိပ်ကားဟုသာ ချိုရီ မှတ်မိသည်..။
ဇာတ်လမ်း ဇာတ်လိုက်နာမည်တွေ ချိုရီ ဘာမှ မသိ….မသိ…။ သိဖို့ အချိန်လေးတောင်မှလဲ ချိုရီ မရခဲ့…။ ရုံထဲ စဝင်ကတည်းက မောလှိုက် ရင်ဖိုရင်း တစ်ခါမျှ မခံစားရဘူးသော စောက်ဖုတ်နှိုက်ခြင်း ၊ နို့စို့ခြင်း ၊ နှုတ်ခမ်းစုတ်ခြင်း များကို တရစပ် ခံစားနေရ၍ လောကကြီးတွင် ထိုချိန်က တတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်လည်း ချိုရီ သိမည်မဟုတ်..။
နေ့လည်က အဖြစ်ကလေး ပြန်တွေးရင်း ချိုရီ ဈေးရောင်းလို့ မဖြောင့် ။ အစ်ကို့ အကိုင်အတွယ် အပွတ်အသပ် အနှိုက်အစုပ်များကိုသာ တွေးနေမိသည်..။ ဟင်းခနဲ ကြိတ်ပြီး သက်ပြင်းချလိုက်သော အခန်းအပြင်မှ အဖေအသံကြားမှ ညအတော်နက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သတိထားမိသည်..။ ထို့ကြောင့် ပြုနေကျအတိုင်း အမေ့ကုတင်ဆီ ထလာခဲ့ရသည်..။
လူမမာ အမေသည် ဆေးတန်ခိုးဖြင့် အိပ်မောကျနေပြီ ဖြစ်သည်..။ အဖေမှာ ညနေပိုင်းသောက်ထားသော အရှိန်ဖြင့် ကုတင်အောက်ကြမ်းပြင်၌ အင်္ကျီမပါ လုံချည် မလုံမလဲဖြင့် ပိုးလိုးပက်လက် အိပ်နေသည်..။ ချိုရီက လမ်းမီးရောင်ဖြင့်ပင် အမေ့ခြင်ထောင်ကို ချပေးပြီး သေသပ်စွာ ဖျာအောက်သို့ဖိရင်း ပြန်လှည့်ထွက်လိုက်သည်..။
``ဟင်းအင်း…ကျွတ်ကျွတ်…ပြွတ် …ပြွတ်….ပြွတ်……`` အဖေသည် မျက်လုံးမဖွင့်ပဲ သူ့လိင်တန်ကြီးကို တပြွတ်ပြွတ်နှင့် ဂွင်းတိုက်ကာ ပက်လက်ကြီး ငြိမ်သွားပြန်သည်..။
``ဟဲ့အယ်….လီးကြီးကလဲ…….`` ချိုရီ မျက်ခုံးထူထူလေးများ ပင့်တက်သွားရ၏…။အဖေသည် ဂေါ်ရခါးစပ်သောသူဖြစ်၍ အသားမဲပြီး ထွားကြိုင်းလှသူဖြစ်သည်..။ယခုမူ …အဖေ့လီးကြီးကို ချိုရီ မမှိတ်မသုံ ကြည့်နေမိသည်..။ နေ့လည်က ဟင်းချက်စားခဲ့သော ခရမ်းညိုအ၇ှည်သီးနှင့် ထပ်တူထပ်မျှ တူလှပေသည်..။
ချိုရီတို့ အိမ်ရှေ့ဓါတ်တိုင်မီးက အိမ်ထဲအထိ ထင်ရှားစွာ လင်းသည်မို့ အဖေ၏ တောင်မတ်ကာ ဆတ်ခနဲ ဆတ်ခနဲ တုံခါနေသော ဂေါ်ရခါး လီးကြီးကို ချိုရီ နှုတ်ခမ်းလေးများ တုန်ရီနေရင်းမှ အနားသို့ တိုးသွားပြီး သေသေချာချာ ကပ်ကြည့်နေမိသည်..။
အဖေ့လုံချည်က ကွင်းလိုက် ခါးပေါ်ရောက်နေပြီး အောက်ပိုင်း ဗလာကြီးဖြင့် ထူထဲသော ကွေးကောက်နက်မှောင်နေသည့် လမွှေးများကြားမှ ကျောက်တိုင် အမဲကြီးအလား မတ်ထောင်နေသော လီးကြီးမှာ တစ်ပေကျော်ကျော်ခန့်မျှပင် ရှိလေမည်လား ထင်ရသည်..။
အဖေသည် အမေ့ကို မလိုးရသည်မှာ ကြာလှချေပြီ..။ အမေနေမကောင်းသည်က တစ်နှစ်ကျော်နေပြီ ဖြစ်သည်..။ တခါတရံ အဖေ ဗားကရာချောက်ထဲမှ ပြည့်တန်ဆာမတွေထံ သွားသွားနေကြောင့်တော့ ချိုရီ သိသည်..။ ဒါလည်း အမေသိသည်..။
ယောက်ျားဆိုသည်က နှစ်နှင့်ချီပြီး မလိုးပဲ မနေတတ်သော သတ္တဝါမျိုးဟု အမေနားလည်သည်..။ ချိုရီသည်လည်း အဖေ့ကို သနားသည်..။ ချိုရီ ကိုးတန်းအထိ အဖေ ပန်းရံ ကူလီ …ရေထမ်း အမျိုးမျိုး လုပ်ကိုင်ရင်း ကျောင်းထားပေးခဲ့ရှာသည်..။ အဖေ အရက်မူးကာ အိပ်မောကျနေပြီ…။
ချိုရီ အဖေ့လီးကြီးကို မရဲတရဲလေး လက်ညှိုးထိပ်လေးဖြင့် ထိကြည့်လိုက်သည်..။ အဖေ မလှုပ်…။ ချွဲပြစ်စိုရွှဲနေသော အရည်များဖြင့် လီးကြီးက ပိုမို မာတောင်လာနေသည်..။ ချိုရီ့ စောက်ဖုတ်လေးမှာလဲ ယားကျိကျိဖြင့် ခံချင်လွန်းလာသည်..။ နေ့လည်က အစ်ကို နှူးနှပ်ထားသော အရှိန်ကလည်း ရှိနေသည်..။ ချိုရီ အဖေ့လီးကြီးကို ကိုင်ပြီး ဖြဲချလိုက်သည်..။
ပြွတ်ခနဲ အရေပြားများပြဲလန်ပြီး လီးထိပ်ကြီးက ခရမ်းသီးထိပ်ပမာ …တဖိတ်ဖိတ် တောက်ပြောင်လာသည်…။ ချိုရီ ထမီလေး မတင်ကာ အဖေ့လီးကြီးပေါ်၌ ခွထိုင်ပြီး…ဖြေးဖြေးလေး ထိကပ်ကြည့်သည်..။
``ဟင့်…`` ချိုရီ လည်ချောင်းထဲမှ အသံတစ်သံထွက်သွား၏..။ ဒစ်ကြီးက ထစ်ခနဲ ခုန်ဝင်သွား၍ ဖြစ်သည်.. .။ အဖေ မူးနေဆဲ…အိပ်နေဆဲ..။ ဝင်လာသော လီးထိပ်ဒစ်ပြဲပြဲကြီး…ချိုရီ့ စောက်ဖုတ်လေးထဲ ပြည့်ကြပ်ပြွတ်သိပ်နေ၍ ဆက်ပြီး မထိုင်ချရဲ..။ မကုန်းမကွနှင့် ငုံ့ကြည့်ကာ အသာလေး ဖိသွင်းချလိုက်ပြန်သည်..။
``အွန့်….အွန်း…………….`` ချိုရီ ပါးစပ်ဟောင်းလောင်းလေးဖြင့် ခေါင်းလေးမော့သွားပြီး လက်သီးလေးများ ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်လိုက်မိသည်..။
လူအိပ်နေသော်လည်း လီးက မအိပ်ပေ..။ မတ်ထောင်နေသော လီးကြီးက ပြည့်ကြပ်ပူနွေးသော အရည်ရွှဲနေသည့် စောက်ဖုတ်လေးတစ်ခုကို လိုးနေရမှန်း မသိပေ….။ သို့သော်လည်း ယောက်ျားတို့သဘာဝ အိပ်မောကျချိန်၌ပင် မတ်ထောင်နေသော
လီးကြီးကိုဖြင့် ချိုရီတစ်ယောက် စေတနာအပြည့်ဖြင့် ပြုစုယုယကာ လိုးပေးနေရှာလေသည်..။
ချိုရီ တဝက်မျှပင် ဝင်အောင် မသွင်းရဲ..။
မိမိစောက်ဖုတ်လေးလဲ ပြဲကွဲသွားမည်ကို သိနေ၏..။ ထို့ကြောင့် ဒစ်ကြီး ဝင်ထွက်ရုံမျှသာ လိုးပေးပြီး မိမိစောက်ခေါင်းလေးထဲမှ အတင်အဓမ္မ အ၇ှိန်တက်လာသော နောက်ဆုံးအချိန်ကျမှ တစ်လက်မခန့် ထပ်ပြီး ဖိသွင်းထိုင်ချလိုက်မိလေသည်..။
ထစ်ခါ..ထစ်ခါ ဝင်သွားပြီး စောက်ပတ်အုံလေးတစ်ခုလုံး ပြဲကွဲပြီး
နာကျင်လာသဖြင့် အသာပြန်ပြီး ထလိုက်ခါ နဂိုအတိုင်း
ထိုစဉ် အမေ့ခြင်ထောင် လှုပ်လာသဖြင့် ချိုရီ အသာလေး လီးကြီးပေါ်မှ ကျော်ဆင်းလိုက်ရလေသည်..။
``ပြွတ်…ဘတ်…`` ချိုရီ စောက်ဖုတ်လေးထဲမှ ပြွတ်ခနဲ ကျွတ်ထွက်သွားသော လီးကြီးသည် အဖေ့ဗိုက်ပေါ်သို့ အရှိန်ဖြင့် ဘတ်ခနဲ ကျသွားပြီး ဆန့်ငင် ဆန့်ငင် ဖြစ်နေသည်..။
ချိုရီ ထမီလေးပြန်ဝတ်ပြီး မိမိအခန်းထဲသို့ ပြန်ဝင်လာခါ ခြေရင်း၌ ပုံထားသော ထမီအဟောင်းတစ်ထည်ဖြင့် စိုရွှဲပေရေနေသော မိမိစောက်ဖုတ်လေးကို သုတ်သင် သန့်ရှင်းပြီး အိပ်ယာထဲ ဝင်ခဲ့လေသည်..။ ရင်ထဲ၌ ကတုန်ကရင် အမောကြီးကား လှိုက်ဖိုနေဆဲ…။ အဖေကတော့ ဘာမှ သိမည်မဟုတ်..။ အဖေ့လီးကြီးမျိုးနှင့်သာ အလိုးခံလိုက်ရပါက ချိုရီ့ စောက်ဖုတ်လေးလဲ အစိပ်စိပ်အမွှာမွှာ ကွဲကုန်မလားဟု တွေးရင်း အိပ်ပျော်သွားလေသည်..။ -------------------×----------------------×-----------------
`မနေ့က …ဘာလို့ မလာတာလဲ…အစ်ကို..``
ချိုရီ မြေနီကုန်းမှာ အရက်သွားယူနေတာ.
.`` ချိုရီက အစ်ကို့ရှေ့သို့ အပိုင်းပုလင်းနှင့် အမြည်းများ
ချပေးရင်း မျက်နှာကို မကြည့်ပဲ ရှက်ရွံ့စွာပြောနေသည်..။
ချိုရီသည် အမှန် လှပလွန်းသူလေးတည်း..၊ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကလည်း ပြောခဲ့ဘူးသလို တစ်တစ်ရစ်ရစ် ဖြစ်ညှစ်ပစ်ချင်စရာ ၊ အဖုအထစ် အမို့အမောက် အဖွံ့အကားတို့မှာ အပိုအလိုမရှိ…။ ယင်းအလှတို့ကို ချိုရီက သူမစရိုက်အတိုင်း အင်္ကျီကြပ်ကြပ်လေးများဖြင့် ထမီကို တင်းနေအောင် ခပ်တိုတို ဝတ်ထားပြန်သောအခါ တင်ပါးကြီးနှစ်လုံး ၊ နို့ကြီးနှစ်လုံးတို့က ``ကျမ အပျိုဖြစ်နေပြီ..လိုးလို့ရနေပါပြီ ရှင် ….`` ဟု အစ်ကို ကာလသားများကို ဆိုင်းဘုတ်တင်ထားသည်နှင့် တူလှသည်..။
ချိုရီတို့ဆိုင်နှင့် မျက်စောင်းထိုးမှ မလှဝင်းတို့ သားအမိကျပြန်တော့ ဝါးခြမ်းပြားကို ထမီပတ်ထားသလို ပြားချပ်နေကြသည်..။ သို့သော် သူတို့က အရက်သောက်လာသူများကို ဆေးလိပ်မီးညှိပေးရင်း မသိမသာ နို့လေးနှင့်လဲ ဖိကပ်ပွတ်သပ်၏..။ တင်ပါးလေးဖြင့်လည်း မတော်တဆလိုလို ပွတ်တတ်၏…။ ချိုရီ သည်လိုမျိုးတော့ အပေါစား မဆန်ချင်..။
အဲ…ကိုစိန်သောင်းက ညစောင့် …….ရေရွှင်သည်..။ ချိုရီ့ ကို နှုတ်နဲ့ရော စာနဲ့ရော မေတ္တာတောင်းခဲ့ဖူး၏..။ ``ချိုရီက ငယ်ပါသေးတယ်..ကိုစိန်သောင်းရယ်….`` ဟု ချိုရီက လိမ်လိမ်မာမာ အပြုံးလေးဖြင့် လှန်ထားခဲ့သည်..။
``ချိုရီ …ချစ်တတ်လာတဲ့ နေ့ကို ကျနော် စောင့်နေမှာပါ….
`` စိန်သောင်းကလည်း သည်နှယ် ဇွဲနပဲ နှင့် စောင့်သည်..။
အစ်ကိုကလည်း အပြင်သွားဖို့သာ တဂျီဂျီ…။
အပြင်ဆိုတဲ့ နေရာရောက်လို့ကတော့ ချိုရီတို့…အလိုးခံရပြီ….ဒါ ကျိန်းသေ…။
အစ်ကို ဒါကြောင့်ပဲ လာလာပြီး တွတ်ထိုးနေတာ မို့လား…၊
တကယ်တော့ အစ်ကိုရယ်…ချိုရီလည်း လိုက်ချင်ပါတယ်…
အစ်ကိုနဲ့ တဝကြီး လိုးပစ်လိုက်ချင်တယ်…အခြေအနေက မပေးဘူး…။
ညနေက အစ်ကို့မျက်နှာညှိုးသွားသည်ကို ချိုရီ စိတ်မကောင်း…။
ခုလို ညဘက်ကျပြန်တော့ အစ်ကိုက မအား..။
ညဆိုင်း ဆင်းရသည့် ဆောင်လုပ်ရေး အငယ်တန်း အင်ဂျင်နီယာဆိုတော့ အစ်ကိုနဲ့ ချိုရီက နေနဲ့လ..လိုပဲ မဆုံနိုင်…။
ညနေက အစ်ကိုပေးသွားသော ရတနာဝင်းထိန် ၏ စာအုပ်လေးကို ချိုရီ အပျင်းပြေ ဖတ်မိသည်..။ အချစ်သင်္ဘော …ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုလေး…ချယ်ရီနံ့ သင်းသော ဂျပန်မလေးရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ပိတောက်နံ့လှိုင်သော မြန်မာလေးတစ်ဦးတို့၏ အချစ်ကို ကျောရိုးခင်းထားသည်မို့ ရင်မှာနွေးထွေးစွာ လှုပ်ရှားရသည်..။ ထိုဂျပန်မလေးကို မြန်မာသင်္ဘောသားလေး အထက်အရာရှိက အဓမ္မ မုဒိမ်းကျင့်သော အခန်းမှာမူ ချိုရီ မျက်နှာလေး ရှုံ့မဲ့ပြီး စောက်ပတ်လေးကို လက်ဝါးနှင့် အုပ်ထားမိသည်အထိ ခံစားရသည်..။
``သမီး…..`` ``ဟင်………အဖေ..`` ချိုရီ ကမန်းကတန်းပင် ခရမ်းသီးကြီး ပစ်ချပြီး ထရပ်သည်..။
`` ချိုရီတစ်ယောက် အဖေ လက်ဆွဲခေါ်ရာသို့ ဖရိုဖရဲလေး ပါသွားကာ
ဟီးနိုးပျက်ကြီးအတွင်း၌ တစ်ကိုယ်လုံး အဝတ်များချွတ်ပြီး အလိုးခံရန် အဆင်သင့် ဖြစ်နေတော့သည်..။ အဖေကလည်း မဲနက်ရှည်လျားသော သူ့လီးကြီးတရမ်းရမ်းကို အသာနှာနှပ်ထားပြီး ချိုရီ့စောက်ပတ်လေးကို ပထမဆုံး မှုတ်ပေးနေပြန်သည်..။
နို့လေးနှစ်လုံး ခါရမ်းနေအောင် ချိုရီ တွန့်လိမ်နေမိသည်..။
တစ်ခါတစ်ရံလဲ အဖေ့ ဆံပင်များကို ဆွဲယူပြီး အဖေ့မျက်နှာနှင့် စောက်ဖုတ်လေးကို အတင်းကြီး ဖိကပ်ပွတ်ပစ်လိုက်မိသည်..။ အဖေ့နှာခေါင်းမှ မှုတ်ထုတ်လိုက်သော လေများသည် ပေါင်တန်လေးနှစ်ခုလုံးနှင့်စောက်ပတ်လေးကို ပါ နွေးခနဲ နွေးခနဲ ခံစားနေရစေပြန်ပါသည်..။
အဖေက ဘာမှမပြော ထွက်ကျလာသော သုတ်ရေပြစ်ချွဲချွဲများကို သူ့လျှာကြီးဖြင့် သိမ်းယူကာ ဂွပ်ခနဲ မြိုချလိုက်သည်..။
ချိုရီ မျက်နှာလေး ရှုံ့သွားသည်..။
အဖေ့ကိုလည်း အားနာသလိုလိုကြီး ဖြစ်သွားမိသည်..။
အဖေက ချိုရီ့ ပေါင်ကြား၌ ရပ်လိုက်သည်..။
မိုးပေါ်ထိုးတက်တော့မယောက် မတ်ထောင်နေသော လီးကြီးက အဖျားငိုက်သွားပြီး…ဒစ်ပြဲကြီးက ချိုရီ့ ပါးစပ်ဝ၌ တေ့ကပ်လာသည်..။
``အမလေးလေး….ကောင်းလိုက်တာ သမီးရယ်….`` အဖေ့ တင်ပါးကြီးများ ဆန့်ငင်ဆန့်ငင် ဖြစ်ရင်းပြောသည်..။ ပါးစပ်ထဲရှိ ဒစ်ကြီးကို ချိုရီက လျှာလေးဖြင့်မနားတမ်း ယက်ပေး ကလိပေးရင်း ရှေ့နောက် လှုပ်ရှားပေကာ တံတွေးမျာ စိုစွတ်ကုန်သည်အထိ စုပ်ပေးလိုက်သည်..။အဖေက အရှိန်တက်လာပြီး ချိုရီ နောက်စေ့လေးကို ချုပ်ကိုင်ကာ ပါးစပ်ထဲသို့ ဆောင့်လိုးချလိုက်သည်..။ ချိုရီမှာ အသက်ရှူများ မှားတော့မလိုဖြစ်သွားရသည်..။
ပြီးမှ အဖေက လီးကြီးကို ချိုရီ့ပါးစပ်မှ ပြွတ်ခနဲ ဆွဲချွတ်ပြီး သုတ်ရေများကို နို့လေးနှစ်လုံးပေါ်သို့ ဖောက်ခနဲ ဖောက်ခနဲ ပန်းချပစ်လိုက်သည်..။ ပူနွေးသော သုတ်ရေများက ချိုရီ့ နို့တွေပေါ်တွင် ပူခနဲ ပူခနဲ ကျရောက်လာလေရာ ချိုရီက မြတ်နိုးနှစ်သက်စွာဖြင့် ပွတ်သပ်လိမ်းကျံနေမိပြန်သည်..။ တသင်းသင်းလှိုင်နေသော သုတ်ရည်ရနံ့များက သူတို့နှစ်ဦးကို လွှမ်းခြုံထားလေသည်..။
``သမီး…ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို အဖေ့ပုခုံးပေါ်တင်…..`` အဖေက ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ပုခုံးပေါ် ထမ်းတင်လိုက်ရာ ချိုရီ၏ လုံးတစ်တင်းမာနေသော စောက်ဖုတ်လေးနှင့် မဟူရာရောင်လီးကြီးတို့မှာ မျက်နှာချင်းဆိုင်မိနေကြပြီး တဆတ်ဆတ်တုန်နေကြပေသည်..။ ချိုရီက ခုံပေါ်တွင် ပက်လက်ကလေးဖြစ်သွားရသည်..။ ခြေနှစ်ချောင်းက ခုံအောက်မှ မတ်တတ်ရပ်နေသော အဖေ ပုခုံးပေါ်ရောက်နေရာ လီးနှင့် စောက်ပတ်တို့မှာ တစ်လက်မပင် မကွာတော့ပေ…။
အဖေက သူ့လီးကြီးကို ကိုင်ပြီး ချိုရီ့ စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းလေးအတိုင်း အထက်အောက် ပွတ်သပ်ဆွဲချပေးပြီး အရေများ စိုရွှဲသွားမှ…
``လိုးမယ်နော်…သမီး….`` ``အင်း….အင်း…….`` ချိုရီ နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို ပူးကပ်ပြီး ပါးစပ်အတွင်းသို့စုသွင်းကာ အင်း အင်း ဟုပြောရင်း ဝင်လာမည့်လီးကြီးကို အသင့်စောင့်ကြိုရန် မျက်စေ့မှိတ်ထားမိသည်..။ ဒစ်ပြုတ်ကြီးက စောက်ပတ်လေးအောက်ဖက်နားမှ ကော်ဝင်သွားလေပြီ…။
ချိုရီ အသံလေးနဲနဲ ကျယ်သွားသည်ထင်၏..။
` ချိုရီကုန်းထလိုက်မှ လီးကြီးက ပိုဝင်သွားပြီး အပျိုမှေးလေးကို ထိုးဖောက် ဖြိုခွဲပစ်လိုက်ရာ သွေးမျာ ဒလဟော ကျဆင်းလာလေတော့သည်..။ စောက်ပတ်အောက်နှုတ်ခမ်းလေးမှာလဲ စပါးလုံးနှစ်ထောက်စာခန့် ကွဲသွားပြီး..စပ်ဖျင်းဖျင်း ဖြစ်သွားလေသည်..။
ထိုစဉ်တိုင် လီးကြီးက တဝက်မကျိုးသေး…။ ``တော်ပြီ….တော်ပြီ…ပြန်ချွတ်တော့…လီးကို အခုပြန်ချွတ်ပေး…..ဟင့် ဟင့်……..`` ချိုရီ နာကျင်လွန်း၍ ကြိတ်ပြီးအော်သည်..။ မျက်ရေများလည်း ကျဆင်းလာသည်..။ မျက်နှာလေးက ငိုမဲ့မဲ့ သနားစဖွယ်လေးပင်…။
``အဟီး…..ဟီး..နာတယ် အဖေရဲ့…နာတယ်…သမီး မခံနိုင်တော့ဘူး…..
ခလေးလေးပမာ ချိုရီ ငိုပါလေပြီ…။
အဖေကလည်း အရှိန်တက်နေပြီဖြစ်ရာ သွေးစလေးများ ပေကျံနေသော ချိုရီ့စောက်ခေါင်းလေးထဲသို့ ကျန်လီးကြီး တဝက်ကို ဖိသွင်းချလိုက်လေတော့သည်..။
ဟင့်….အွန့်….`` ချိုရီ ပါးစပ်လေးဖောင်းသွားပြီး အသက်အောင့်ထားသည်..။ ဗိုက်ထဲသို့တိုင် ဝင်သွားပြီလားဟု ထင်မှားစရာ ရှည်လျားလွန်းလှသည့်လီး……။